सैनिक पोशाकमा विप्लवको उद्घोष: अब रोल्पामा होइन काठमाडौंमै हतियार उठाइन्छ - Everest Dainik - News from Nepal
सैनिक पोशाकमा विप्लवको उद्घोष: अब रोल्पामा होइन काठमाडौंमै हतियार उठाइन्छ
‘महरा सर, हाम्रो सपना दिवासपना भए, रात्री सपना कस्तो हुन्छ ?’
रोल्पा, फागुन १५ । विप्लव माओवादीले राजधानीबाटै एकीकृत क्रान्ति शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पार्टीको महाधिवेशनपछि आयोजित आमसभामा बोल्दै नेता विप्लवले अबको लडाई रोल्पामा मात्र नभएर राजधानीमा नै हुने बताएका हुन ।
पार्टी महाधिवेशनपछि आयोजित कार्यक्रममा नेता विप्लवले माओवादी केन्द्रले क्रान्तिसँग गद्दारी गरेको आरोप समेत लगाए ।
‘माओवादी’ पदावली थबाङमै छोडेर हिडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले फेरि हतियार उठ्ने बताएका छन् । हिजोको जनयुद्ध सामान्य उक्साहटमा नभएको दावी गर्दै विप्लवले प्रचण्डको भासन र महराको अनुहार हेरेर जनयुद्ध नगरिएको बताए । कि बलिदान, कि मुक्ति गर्ने भनेर हिडेको जनयुद्धको माओवादीले अपमान गरे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अधिकारको लडाई कहिल्यै नरोक्ने बताए । ‘अधिकारको लडाई गर्दा कसैले दमन गर्छ भने हतियार उठ्नसक्छ’ विप्लवले भने ‘अबको लडाई रोल्पामा मात्र होइन काठमाडौंमै हुन्छ ।’
दलालहरुविरुद्ध अब काठमाडौंका मजदुर तथा विद्यार्थीहरुले लड्ने दावी गरे । माओवादी नेता कार्यकर्तालाई मुद्धा लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले यदि त्यसो गरिए जनता आफैले बन्दुक उठाउने दावी गरे । थबाङबाट फेरि क्रान्तिको झन्डा उठाएको भन्दै विप्लवले जनताले भनेमा चुप लागेर बस्ने तर दलालहरुले दबाउन खोजेमा तरबारजस्तो भएर उभिने बताए । नेपाली जनता सन्तुष्ट नहुँदासम्म क्रान्ति नरोकिने उनले दावी समेत गरेका छन् ।
महरालाई प्रश्नः गुरु सपना भनेको के हो ?
अधिकांश समय माओबादी केन्द्रलाई गालि गर्नमै खर्चेका विप्लबले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा आफ्नो गुरु भएको बताउँदै महराले एकसाता अघि बोलेका कुराको प्रतिवाद गरे ।
याे पनि पढ्नुस माओवादी बन्दसत्र : जनक्रान्तिमा होमिन नेतृत्वलाई दबाब
गत ६ फागुनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विप्लवको सपना ‘दिवासपना’ भएको बताएका थिए । महराको टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै विप्लवले भने ‘महरा सर, हाम्रो सपना दिवासपना भए, रात्री सपना कस्तो हुन्छ ?’ रात्री सपना पैसा कमाउने, मुर्ती चोर्ने, रक्तचन्दन ओसार्ने भएको आरोप लगाए । क्रान्ति गर्ने कुरा कसरी दिवासपना भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले एकातिर दिएजस्तो गर्ने अर्कोतिर पुरै ह्याम्मर हान्ने कार्य गरिरहेको भन्दै प्रचण्ड र महराको कडा आलोचना गरे । उनले क्रान्ति सम्भव नभए राजिनामा दिएर बालकल्याणमा साइन्स पढाउन महरालाई आग्रह गरे । साथै प्रचण्डलाई समेत चितवनमा गएर कृषि गर्न चुनौती दिए । प्रचण्डको बोली लिबाङ नजिकैको धाङ्सी खोलाकैजस्तो भएको भन्दै उनले भने ‘साउन भदौको धाङ्सीखोला साँझ सुत्दा एकातिर बग्छ, बिहान उठेर हेर्दा अर्कैतिर बग्छ, त्यस्तै हो प्रचण्डको भासण ।’ प्रचण्ड, बाबुरामले माओवादीलाई विक्रि गरेको आरोप लगाए ।
विप्लवले नेपालका कुनै पनि दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुस्मन नरहेको बताएका बिप्लबले ‘कुनै पनि दल हाम्रो दुस्मन होइनन्े ‘हरेक दलमा दलालहरु छन् ती हाम्रा दुस्मन हुन् उनले भने ।’ कुनै दलप्रति द्वैत भाव नभएको भन्दै उनले मुख्य दुस्मन दलाल पुजिपति भएको बताए । थबाङलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना प्रचण्ड बाबुरामले डाँडो काटेर गएपछि सबै हराएको आरोपनि लगाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विप्लव माओवादीले पार्टीको नाम फेर्ने !
विपीलाई पढ्न सुझाव
विप्लवले नेपालमा रहेका सबै दलले विपीलाई पढ्न सुझाव दिए । देशै बेचेर आफ्नो स्वार्थका लागि लम्पसार पर्ने नेताहरुका लागि विपी एउटा उदाहरण भएको पनि बताए । स्वार्थका लागि सिक्किम बेचेका लेन्दोप दोर्जे नेपालमा थुप्रै रहेको भन्दै तिनीहरुनै मुख्य दुस्मन रहेको बताए । अबको लडाई दलालसंगका पर्ने बताउदै उनले रोल्पाबाट होईन काठमाण्डौबाट लडिने बताए ।
कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण आवश्यक
विप्लवले नेपालमा विशाल धु्रविकरण आवश्यक रहेको बताए । कम्युनिष्टहरुको एकीकरण जरुरी रहेको भन्दै विप्लवले त्यसैका लागि नाम परिवर्तन गरिएको बताए । सबै दलमा देशभक्त रहेको भन्दै उनले कम्युनिष्ट र देशभक्तहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने विश्वास व्यक्त गरे । पुच्छर झुन्ड्याएर नेपालका कम्युनिष्टहरु विशाक्त भएको भन्दै उनले अब हरेक पार्टीबाट सच्चा कम्युनिष्टहरु गोलबन्द हुनुपर्ने बताए । उनले हिजो माओवादीलाई एक बनाएर लुटेको अहिले फुटाएर लुटेको आरोप लगाए ।
विप्लवले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नेपर्ने तर्क गरे । माओवादीसँग गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता माओवादी बेगर लागुनहुने दावी गरे । ‘शान्ति सम्झौता जोसँग भएको हो उसलाई बाहिर राखेर कसरी प्रक्रिया चल्न सक्छ ?’ विप्लवले भने ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता लागु भएकै छैन ।’
तपाई चुनाव गर्नुस्, हामी अर्को सत्ता चलाउँछौं ।
थबाङमा शहीद स्मृति भवन निर्माण गरिएको भन्दै उनले अब शहीद स्मृति संग्रहालय बनाउने जानकारी दिए । उनले नेपालमा आर्थिक सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताएका छन् । थबाङमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनको घोषणा सभामा बोल्दै बिप्लबले माओबादी केन्द्रलाई खुब गालि गरेका थिए ।
यसकारण फेरियो नाम
विप्लवले चार कारणले पार्टीको नाम फेरिएको बताए । आठौं महाधिवेशनले नेकपा माओवादीबाट ‘माओवादी’ हटाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमात्र बनाएको छ ।
१. विश्व कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई नयाँ भाव दिन,
२. नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई तीब्र धु्रविकरण गर्दै एकतावद्ध गर्न,
३. माओवादी बाहेकका सबै देशभक्त शक्तिहरुलाई विभिन्न समूहभन्दा माथि उठाएर गोलबन्द गर्न ,
४. माओवादी भनेको फाइदाका लागि जे पनि गर्छ भन्ने भ्रम तोड्न ।
राजधानीको खुल्ला मञ्चमा फागुन १ गते उद्घाटन भइ रोल्पाको थबाङमा १० फागुनसम्म आयोजित बन्दसत्रले विभिन्न ११ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महाधिवेशन समापन गरेको छ । महाधिवेशनले संसदीय व्यवस्था नभई बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि दवाव दिने समेत बताएको छ । महाधिवेशनले दुइपटकभन्दा बढि पदमा रहन नपाउने नीति समेत पास गरेको छ । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा ८१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । जसमा ६१ जना पूर्ण र २० जना बैकल्पिक सदस्य रहेको बताइएको छ । शनिबार लिबाङमा आयोजित सभामा पार्टी प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, उमा भूजेल लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । शहीद सप्ताहको अवसर पारी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शहीद परिवारलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।